2.2. खोजमूलक स्टोरीका लागि लिइने अन्तर्वार्ता र अरू स्टोरीका लागि लिइने अन्तर्वार्ताबीच के कस्तो अन्तर छ ? - Investigative Journalism Manual | Investigative Journalism Manual
> खण्ड > खण्ड सात > 2.	अन्तर्वार्ता गर्दा कस्तो व्यवहार अपनाउने ? > 2.2. खोजमूलक स्टोरीका लागि लिइने अन्तर्वार्ता र अरू स्टोरीका लागि लिइने अन्तर्वार्ताबीच के कस्तो अन्तर छ ?
योजना, तयारी र सही तथा लचकदार प्रश्नका मामलामा दुवै खालका अन्तर्वार्ताबीचमा केही पनि अन्तर हुँदैन । तर खोजमूलक स्टोरी गर्दा अलि फरक सीप अपनाउनुपर्छ र आफ्नो तरिका अलि फरक हुनुपर्छ । समयको मामलामा यी दुई खालका अन्तर्वार्तामा अन्तर छ । अन्तर्वार्ता कोसँग लिने भन्ने बारेमा मात्र होइन कसलाई कुन वेला (स्टोरी थाल्दै, अथवा केही जानकारी लिइसकेपछि अथवा सबैभन्दा अन्त्यमा) लिंदा उत्तम हुन्छ सो बारेमा पनि सोच्नुहोस् । खोजमूलक रिपोर्टको सन्दर्भ फरक हुनाले, यसका विषय ठूला र बढी संवेदनशील हुनाले स्रोतले तपाईंलाई असहयोग गर्न सक्छ, ऊ प्रतिरक्षात्मक हुनसक्छ, ऊ नबोल्न सक्छ अथवा उसले तपाईंलाई छल्न सक्छ । त्यसैले, खोजमूलक स्टोरीका लागि अन्तर्वार्ता लिंदा फरक रणनीति अपनाउनुपर्छ । प्रश्न सोध्ने फरक विधिले आफूलाई भिन्न लक्ष्यमा पुग्न सहयोग गर्छ ।
स्टोरी पूर्ण रूपमा तयार नहुँदै पनि सतर्क रहनुपर्छ । स्टोरी गर्दै जाँदा स्टोरीसँग सम्बन्धित शक्तिशाली व्यक्ति अथवा संस्थालाई कुराकानीका लागि तपाईंले अनुरोध गर्दा उनीहरू आफ्ना गतिविधिका बारेमा सतर्क हुनसक्छन् । उनीहरूले तपाईंलाई समस्या सिर्जना गर्ने मान्छे ठान्न सक्छन् । त्यसैले उनीहरूले जे गर्न पनि सक्छन् । कुराकानी गर्न अस्वीकार गर्नु उनीहरूका लागि सबैभन्दा सजिलो तरिका हो । तर जानकारी खोतल्न छाड्नुहुँदैन । उनीहरूले शारीरिक कारबाही गर्ने अथवा कानूनी कारबाही गर्ने धम्की दिनसक्छन् । तेस्रो व्यक्ति (प्रायःजसो सम्पादक वा प्रकाशक) मार्फत हल्का ढंगले धम्क्याउन सक्छन् । स्टोरी छापिनुभन्दा पहिल्यै मुद्दा हाल्ने धम्की पनि दिनसक्छन् । उनीहरूले ‘मानहानि’ को तरबार देखाउन सक्छन् ।
खोजमूलक स्टोरीले अहिलेसम्म थाहा नभएका कुरा खोतल्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ । कसैले झूटा कुरा बोलेर वा चूप लागेर तथ्य लुकाएको हुनसक्छ । उदाहरणका लागि, मन्त्रीले संसद्मा झूटा कुरा बोलेको हुनसक्छ । अथवा समाजले गरीब युवतीको तस्करीका बारेमा केही पनि नबोलेको हुनसक्छ । यस्ता तथ्य बाहिर ल्याउँदा त्यसले हलचल मच्चाउन सक्छ । यसको अर्थ हो अन्तर्वार्ता मिलाउने काम एकदमै बढी संवेदनशील हुन्छ । अन्तर्वार्तामा के कस्ता कुरा सोधिन्छन् भनेर पहिल्यै जानकारी दियो भने स्रोतले कुराकानी गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ । सार्वजनिक ठाउँमा अन्तर्वार्ता लिंदा स्रोतलाई खतरा हुनसक्छ ।
अन्तर्वार्ताका लागि अपनाउन सकिने रणनीति तीन खालका छन् । अनौपचारिक अथवा पृष्ठभूमि बुझ्न गरिने वा तथ्य जान्नका लागि गरिने अन्तर्वार्तामा पूरै अन्तर्वार्ता भर एकै किसिमका प्रश्न सोधिन्छन् । ती उति धेरै अप्ठ्यारा हुँदैनन् । कुराकानी अघि बढ्दै जाँदा प्रश्न पनि कठोर बन्दै जाने हुँदैन । व्यक्ति चित्र तयार गर्नका लागि गरिने प्रश्न शुरूमै व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छन् । जस्तै, कुन स्कूल पढ्नुभयो ? कोसँग बिहे गर्नुभयो ? किन ? कविता लेख्न कसरी शुरू गर्नुभयो ? कहिलेकाहीं बन्द प्रश्न पनि सोधिन्छन् । त्यस्ता प्रश्न सोध्दा व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी पाइन्छ । जसको व्यक्ति चित्र लेख्ने हो उसका विचार बारेमा पनि पाठक जान्न चाहन्छन् । त्यसैले कुराकानी बढ्दै जाँदा विषय बृहत्तर हुँदै जान्छ । जस्तै, आधुनिक उपन्यास कुन अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ ? साहित्यिक पुरस्कारका बारेमा तपाईंको के विचार छ ? फलानो पुरस्कारका लागि यसपालि गरिएको मनोनयन तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? यस रणनीति अनुसार अन्तर्वार्ता सानो विषयबाट थालिन्छ र विस्तारै त्यसको क्षेत्र फैलँदै जान्छ ।